Filtrer les éléments par date : mercredi, 17 mai 2017
mercredi, 17 mai 2017 22:07
Antenimieran’ny Varotra sy ny asa tanana : Napetraka ny mpikambana vaovao mpitantana eto Vakinankaratra
Nihazakazahana faran’izay haingana ny alatsinainy 15 may 2017 ny fametrahana azy satria niaraha-nahalala fa nisy ny olana teo anivon’ny FIVMPAMA sy ny FIOVA izay mpifanandrina nandritra ny fifidianana.
Minisitra roa be izao no nidina teto Antsirabe nametraka ireo tomponandraikitra vaovao, izay notsofina rano hahavita ny asany.
Mikasika ny fifanolanana dia nambaran’ny Minisitry ny varotra Tazafy Armand fa izay tokony hisahana izany no miandraikitra izany fa ho azy ireo dia nadio ny fifidianana.
Ny fanofanana sy fanentanana ireo mpandoa hetra manodidina ny 12.000 moa no laharampahamehana ho an’ny filoha vaovao mba tsy ho 197 fotsiny ny ho mpifidy amin’ny manaraka.
mercredi, 17 mai 2017 21:57
Antsohihy: Adiny dimy isan’andro ny fahatapahan-jiro
Reraka ny mitaraina ny vahoaka amin’ity delestazy ity noho izy efa matetika loatra nefa tsy hita izay tena vahaolana maharitra.
Misedra olana ireo mivelona amin’ny fampiasana ny herinaratra toy ny mpanao volo, ireo mampiasa vata fampangatsiahana, ireo Cybercafé.
Anisany mampirongotra ny tsy fandriampahalemana anefa ny fahatapahan-jiro lava eto Antsohihy ity. Miandry ny vahoaka mitroatra ve vao handray fepetra ny Fanjakana amin’ity olan'ny delestazy ity ?
mercredi, 17 mai 2017 21:53
Antsalova : Vehivavy iray mpampianatra nataon’ny dahalo takalonaina
Mafampana ny asan-dahalo aty Antsalova. Nanafika olona nitondra entana tamin’ny sarety avy any Ambalakazaha Bemamba hiazo an’Antsalova izy ireo omaly.
Nataon’ireo dahalo takalonaina nandritra izany ny vehivavy iray mpampianatra, sady tompon'entana. Navotsotr’izy ireo ilay ramatoa mpampianatra rehefa nahazoany vola roa hetsy sy finday telo. Lasan’ireo dahalo ihany koa ny omby sarety miisa efatra.
mercredi, 17 mai 2017 20:43
Fankalazana ny faha 70 taonan'ny Sekoly Sainte Famille
Nankalaza ny faha 70 taona nijoroany ny sekoly Katolika Sainte Famille etsy Mahamasina.
Nisy ny hetsika maro samihafa, nentina nankalaza izany, natomboka tamin'ny fanompoham-pivavahana izany, izay notanterahina teny an-toerana.
Ankoatra izay dia nisy ihany koa ny fanokanana fotodrafotr’asa, izay fanavaozana sy fananganana ireo salle des prof sy ireo kilasy maro samihafa.
Marihina moa fa manodidina eo amin’ny valonjato sy arivo (1800) eo ho eo ny mpianatra ato amin’ity sekoly ity, izay fanabeazana aram-pinoana moa izy ity.
mercredi, 17 mai 2017 14:04
Fiarahamonina : Mpamily Taxi telo lahy tra-tehaky ny Polisy teo ampifohana rongony
Teny amoron-dranomasina Ampandrozonana Sambava izy ireo no sarona omaly maraina ny talata 16 mey, tokony ho tamin’ny 10 ora.
Tampoka tamin’izy telo lahy ny fahatongavan’ny Polisy izay sendra nijery ny faritra manodidina izay nahitana faty olona no nifanehatra tamin’ireto.
Nosamborina izy telo lahy ary hanaovana famotorana lalina mialoha ny hanolorana azy ireo ny Fitsarana.
mercredi, 17 mai 2017 13:53
Cette journée est aussi dédiée aux Télécommunications.
mercredi, 17 mai 2017 12:34
Andry Ratovo: Tolotanana ho an'ny mpanao gazety mila fitsaboana
Natao omaly tetsy amin’ny Tahala Rarihasina, ny tolo-tanana ho an’i Andry RATOVO izay mpanao gazety. Mila fitsaboana any ivelany izy ary antapitrisany maro ny sarany.
mercredi, 17 mai 2017 11:36
Sambava : Tovolahy iray 25 taona maty nisy namono tamin’ny fomba feno habibiana
Voakapa antsibe teo amin’ny hatony sy ny tanany i Angelo.
Raha ny fitantaran’ny rahalahiny izay iray trano aminy, dia ny alatsinainy 15 mey tamin’ny 6ora hariva i Angelo no niala tao an-trano toy fanaony, mandeha mampakatra omby avy any an-tsaha.
Tonga ihany ny tamin’ny 7ora sasany hariva saingy tsy niverina izy, ka mahina ity zandriny ity fa tsy fanaony ny toy izao.